Gardes Luxembourg any Paris
Ireo izay mikasa ny hanao dia lavitra mankany Parisy tia tanindrazana tsy ho ela, dia mendrika ny hahita ny masony tsy ny Arc de Triomphe, ny Louvre, ny Eiffel Tower ary ny Champs-Elysees . Misy mari-pamantarana miavaka iray hafa ao amin'ny renivola Frantsay, mba handinihana tsara ny atao hoe heloka. Momba ny Gard Gardens any Paris, izay mandrakotra faritra 26 hektara. Taloha, ny tanjona fototra amin'ity tranobe palitao ity sy ny zaridaina ao afovoan-drenivohitra dia ny tranon'ny mpanjaka. Androany ny valan-javaboarin'i Luxembourg dia trano fonenan'ny lapa. Eto, ao amin'ny lapa, misy ny fivorian'ny Antenimieran-doholona, ​​ary ny efitra faharoa ao amin'ny parlemanta frantsay. Ny valan-javaboary dia mipetraka ao amin'ny Trano Latina.
Ny fametrahana ny zaridaina
Mba hahitana ny zaridaina any Luxembourg dia mila sarintany ianao, satria lehibe ny faritany. Nahoana no mandany fotoana mandehandeha manodidina ny faribolana na mankany amin'ny farany? Avy any avaratra ny tanimbolin'ny sisin-tany ary ny tranolam-panjakana ofisialin'ny lapam-panjakana (Small Palace), tranom-bakoka sy trano fandroana. Any atsinanana, ny zaridaina dia miankina amin'ny Sekoly Ambony misahana ny harena an-kibon'ny tany ao Paris.
Ireto misy lafiny roa sy kolontsaina roa mifamatotra amin'ny fomba mahagaga. Ny lapam-pasika dia voahodidin'ny zaridaina maherin'ny 400 taona, ahitana latabatra sy fandriana mamelana amin'ny fomba nentim-paharazana frantsay. Misy karazana geometry mafy sy andalana. Ary ny faritra atsimo-atsinanana sy atsinanana dia nivadika ho faritry ny faritra iray, izay mifanaraka amin'ny fomba ofisialy Anglisy taty aoriana. Mandehandeha ao amin'ny valan-tserasera ianao, toa manomboka amin'ny vanim-potoana. Fahatsapana mahafinaritra!
Hetsika ho an'ireo vahiny ao amin'ny valan-javaboary
Mahafinaritra ny mandeha an-tongotra fa tsy afaka mandehandeha eny amin'ny lalana sy ny lalan'ny zaridaina fotsiny ianao. Eto ianao dia hanolo-tena hampiasa ireo serivisy maro karazana fiaramanidina. Azonao atao aza ny mijery ny manodidina ny manodidina. Ho faly ny ankizy amin'ny fitsidihana ny teatra vato ao amin'ny Miniatures "Guignol", izay ahitana ny karazan'entana voalohany dia ny Petrushka malaza, mandeha amin'ny carousel taloha ary milalao amin'ny kianja filalaovana. Azonao atao ny manandrana ny tananao amin'ny baolina, saka, tennis, bocce.
Fa ny zava-kendren'ny Garden Luxembourg dia ny Loharano Afovoany. Ny maha-tokana azy dia tsy amin'ny hatsarana fotsiny. Raha tianao, dia azonao atao ny manofa dika kely amin'ny sambo ary avelao handeha irery izy. Misy ihany koa ny loharano ao amin'ny Loharanon'i Medici ao amin'ny Gardens Luxembourg. Mino ny mpahay tantara fa ny asany dia ny asan'i Salomon de Brossu. Ny loharano Medici any Paris, naorina tao amin'ny zaridaina tamin'ny taona 1624, dia raisina ho ankamantatra indrindra. Matetika no azo atao ny mahita olon-tia.
Fanintonana iray hafa dia ny Statue of Liberty, izay mipetraka ao amin'ny zana-toeran'ny gardin Luxembourg. Izy dia iray amin'ireo efatra novokarin'i Auguste Bartholdi. Ny haavon'ny metaly dia roa metatra. Ankoatra ny Statue of Liberty, misy sarivongana maro hafa ao amin'ny valan-javaboary izay mamorona hafanana mahatalanjona sy atsy ho atsy. Eto dia afaka mahita tsangambato ho an'ny mpanorina ny valan-javaboary, ilay mpitondratena an'i Henry IV, Maria de 'Medici.
Ao amin'ny faritry ny zaridaina dia misy ny trano mozika, izay misy ny fampisehoana vondrona isan-karazany mamorona. Eto ny mpanakanto sary no mampiseho ny asany amin'ny mpandalo.
Ny zaridaina sy ny zaridaina ary ny tsangambato ara-javakanto, noforonina tamin'ny baikon'i Maria Medici tamin'ny 1611-1612, dia mendrika ny handany fotoana eto. Fahatsiarovana mamirapiratra amin'ny fiainana iray no manome toky anao. Ary aza adino ny mitondra ny fakantsarinao miaraka aminao mba hamenoana ny fanangonanao sary.
Resorts of Egypt - Sharm el-Sheikh
Snowman amin'ny tànana manokana
Ny valan-drano lehibe indrindra any Moskoa
Hotely Cheap Hotels any Kiev
Bolgaria, Golden Sands - manintona
Ahoana no hianarana ny fomba handresen-dahatra?
Mpamboly elektrika ho an'ny fonenan'ny fahavaratra
Saline salicylique - ampiasaina
Inona no fikarakarana yorky?
Aromalamp amin'ny tananao
Fikajiana ny efitrano fandraisam-bahiny sy efitrano fandriana
Akanjo ho an'ny volo misy menaka voanio
Kate Middleton dia nitsidika ny Centre Center Children's Center
Mofomamy "Grafsky ruins" miaraka amin'ny meringue
Ketanov avy amin'ny nify
Fomba entina mavesatra
Ny Mips no kisoa malaza indrindra manerana izao tontolo izao!